Maxay tahay inaan ka ogaado cilmi-baarista muhiimka ah ee Amazon in uu noqdo iibiye wanaagsan?
Qof walba oo iibiya khadka internetka ee iibiya on Amazon wuxuu ogaadaa in cilmi-baaristu ay noqon karto aasaas adag oo ah ganacsiga macaamilka ee maraakiibta. Oo aynu aragno hal mar - caadooyinka macaamiisha ee Amazon waxay u baahan yihiin cilmi-baaris iyo faham qoto dheer, dabcan, haddii aad rabto in liiska alaabadaada si fiican loo-naqshadeeyo oo lagu muujiyo natiijooyinka raadinta ugu sareysa. Ugu dambeyntii - si aad u abuurto gaadiidka badan oo ka mid ah ereyada muhiimka ah, taas oo kordhinaysa isbarbardhiggaaga. Laakiin arrintu waa mid aan ka duwaneyn makiinadaha waaweyn ee raadinta (sida Google laftiisa, iyo sidoo kale Yahoo, ama Bing), rikoorka rikoorka raadinta ee Amazon waxa uu leeyahay midab-gaar ah "wax-soo-saarka" - fascinators hire melbourne. Taas macnaheedu waa in laga eego aragtida Search Engine Optimization (SEO), laguguma talin inaad ku sii wado sii deynta Google AdWords, ugu yaraan marka ay timaado cilmi-baarista muhiimka ah ee Amazon. Xaqiiqdu waxay tahay in Qorshaha Kelmadaha muhiimka ah uu ku fiican yahay fahamka raadinta dhabta ah ee raadiyaha dukaamada. Isla mar ahaantaa, si kastaba ha ahaatee, qalabkan aasaasiga ahi marnaba ma qaadi karo xog buuxa oo sax ah oo loo baahan yahay si loo sameeyo xulasho xulasho oo si fiican loo beegsado si loogu daro liiska wax soo saarka ee si fiican loo siman yahay had iyo jeer joogitaanka sare ee raadinta.
Amazon SEO iyo algorithm Product Product
Aan si qoto dheer u galno xaalada iyo arag sida A9 u shaqeyso (Amazon rikoodhka weyn ee raadinta algorithm). Tixgelinta A9 dhab ahaantii dareenka ku saabsan kordhinta iibsiyada guud ee ku yaala buuggan aadka u badan ee iibka online, liiska SERPs waxay ku salaysan tahay laba arrimood oo soo socda:
Cunsurka waxqabadka - Macnaheedu waa in shay kasta oo leh sumcad wanaagsan iyo taariikhda iibka lagu kalsoonaan karo ay u badan tahay in lagu soo bandhigo meel sare oo sare u ah raadinta alaabta Amazon. Qiyaasaha Heerka Waxtarka ee muhiimka ah ayaa ah CTR (qiimaha gujinta), CR (heerka isbedelka), iyo dabcan dhabta iibka netka.
Cunsurka - Waxay ku talineysaa in si sax ah loo soo saaro cinwaanka sheyga, sharaxaadda iyo xabbadaha si fiican loogu farsameeyo keywords keywords (ie, kaas oo la kulma weydiimaha raadinta ee ay codsadeen dukaamada nool) - Waxa kale oo uu yeelan doonaa fursado xoog leh oo lagu muujin karo si ballaaran oo loo helo baadhitaanka alaabta Amazon.
Amazon Keyword Research ee Qalabka Gaarka ah
Sidaa darteed, aynu wajahno - habab shakhsiyeed oo dheeraad ah (halkii falanqaynta ereyga caadiga ah ee SEO). Iyo qodobka ku-meel-gaadhka ahi waa dhab ahaan waxa ay tahay in diirada la saaro wax kasta oo kale. Taasi waa sababta aan u dooranayo qalabka muhiimka ah ee muhiimka ah ee Amazon iyo cilmi-baarista ay ku guuleystaan ​​raadinta isku-dhafan kuwaas oo soo saari kara is-dhex-galka dhabta ah oo leh heshiisyo dhab ah. Sida aniga ahaan, aniga ahaan waxaan shakhsi ahaan u adeegsaday qalab cilmi-baaris ah Sonar Amazon. Dabcan, waxa kaliya oo adiga kugu habboon inaad go'aan ka gaadho qalabka ama qaabka internetka si aad u doorato. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka Sonar waxaan qabaa faa'iidooyin aad u qanacsan, sida xajinta liiska gaaban ee ugu sarreeya ee talo-bixinta muhiimka ah (oo u muuqata inay tahay meel aad u fiican), cilmi-baaris tartan ah (qaadashada jumlado raadin sare oo toos ah - toos ah iibiyayaashii horay u ahaa runtii waa cajiib), fikrado qaali ah iyo tixgelinno ku saabsan isku darka raadinta ee ku guulaysta ah ayaa lagula taliyey halkan iyo hada, iyo weliba in ka badan.